Is 2018 gore rekuiswa kweSADR mari yenyika yakabatana ne crypto currency?
Akaiswa mukati Bitcoin, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa12 December 2017	• 11 Comments
Pakutanga vhiki ino ndakabudisa pa Facebook peji pekutanga yemagazini yeThe Economist kubva ku1988. Inoratidza phenix iyo inozviisa payo pakutsva mapepa emari. Pasi pemutsipa we fenix ndarama yendarama inowanikwa iyo inofanidza zvikuru ye crypto currency bitcoin. Pane iyi mari tinoona [...]
Izvo zvinyorwa nezvimwe zvichange zvakabatanidzwa kuImF Dzakodzero Dzakadhindwa (SDR) neAcchain
Akaiswa mukati Bitcoin, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa9 December 2017	• 16 Comments
Nepo wose zvino nezvezvaiitwawo bitcoin kuti nokukurumidza mari kuburikidza crypto mari, ari crypto-hype sokuti chaizvoizvo kuti zvikurukuru kuchera mari hurongwa pasi sokuti crypto mari kwete pasi chatakagara nemabhengi guru uye IMF . Ingava mari iyo yakashandiswa nemunhu asingazivikanwe [...]
Sei pasina nyika munyika ino inonyunyuta pamusoro pesimba guru rekushandisa kweBitcoin
Akaiswa mukati Bitcoin, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa30 November 2017	• 17 Comments
Cryptocurrency se (kunyanya) bitcoin vanoshandisa magetsi akawanda! Izvozvo zvakanyanya zvokuti zvinodarika kushandiswa kwesimba kwenyika yose. Bitcoin mining inoshandisa simba rinopfuura dzimwe nyika dzakadai seIreland neNigeria. On November 28 Naturalnews.com Website akauya aine simba kudyiwa bitcoin kunyika dzose munyika (ona pano). In [...]
Akaiswa mukati Bitcoin, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa28 November 2017	• 15 Comments
Apo iwe unotanga kupinda muchiitiko che 'bitcoins', unosvika pakuongororwa kwakajeka sezvandakapa munyaya ino. Izvozvo zvinogona kupa manzwiro ekutanga kune chinonzi bitcoin kana cryptocurrency, asi chaizvoizvo icho chaive chimiro chakareruka chaizvo chechokwadi. Cryptocurrency yakawanda uye ine zvose kune [...]
Ndiyo Bitcoin uye 'Big Data' yegoridhe idzva kana mafuta matsva here?
Akaiswa mukati Bitcoin, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa27 November 2017	• 8 Comments
Mumakore ayo okutanga, bitcoin yainyanya kushandiswa nevanhu vaida kubudisa mishonga yavo vasingazivikanwi uye nekutumira tsamba kumba. Vaya vakatanga 7 makore akapfuura uye vakakanganwa 10 euro yematcoints ikozvino ingangodaro ndiyo yekutanga mamiriyoni. Kana mu2010 iwe unongobhadhara 10 euro [...]
Total Visits: 1.495.887
Utachiona hunoyedza kukanganisa muviri wese nekubira stem cell information
Martin Vrijland op Utachiona hunoyedza kukanganisa muviri wese nekubira stem cell information
Patricia van Oosten op Utachiona hunoyedza kukanganisa muviri wese nekubira stem cell information